Azonao atao ve ny mandinika ireo tranonkala kalitao amin'ny tranokalam-pifandraisana?
Ny fananganana rohy dia dingan'ny fahazoana rohy amin'ny tranonkala hafa. Amin'ny fikarakarana saka rohy ara-pambolena, manatsara ny lazan'ny loharano ao amin'ny Internet ianao ary manangana ny toerany ao amin'ny pejy fikarohana Google. Ny kalitao ankamantatra kokoa no anananao, ny laharana ambony azonao avy amin'ny milina fikarohana - rehvid nexen. Raha tsy misy isalasalana, ny backlinks dia heverina ho singa manan-danja. Ny fitaovam-pikarohan-drakitra dia tsy manamarina ny isan'ny rohy atsy ho atsy, fa koa ny kalitao.
Misy fomba maro fomba hananganana backlinks amin'ny aterineto amin'ny tranokalanao. Amin'ny ankapobeny dia mety ho zaraina amin'ny fomba fananganana rindran-damosin'ny SEO izy ireo (tontolon'ny rohy, tranonkala mifandraika, lahatsoratry ny lahatsoratra, spammy blog fanehoan-kevitra, fanoratana an-tsarimihetsika, sy ny sisa), ary fotodrafitrasa SEO mifangaro fototeny fananana, votoatin'ny media sosialy, sy ny sisa). Ny ankamaroan'ny webmasters dia te-hahazo ny valiny haingana ary miresaka momba ny teknika fananganana spammy. Ireo teknika ireo dia manitsakitsaka ny toro-làlana Google an'ny Webmaster ary nofaritana ho toy ny raki-tserasera voarara. Amin'izao andro izao dia afaka mamantatra mora foana ny fanandramana rehetra hamolavolana ny rafitra ny Google ary hitsara ireo tranonkala mifandray amin'ny rafitra fananganana spammy.
Na izany aza, tsy ny tranoben'ny rohy rehetra dia spam ary raha ny marina, ny famoronana rohy amin'ny 2017 dia mbola misy fiantraikany manan-danja eo amin'ny tranonkala fanatsarana sy ny fanatsarana ny lalao.
Ity lahatsoratra ity dia natao hanomezana fanazavana mazava momba ny andraikitry ny backlinks amin'ny fikarohana karazana fikarohana. Hanazava aminao aho hoe ahoana no iarahan'i Google ny rohy misy anao sy ny loharano azonao ampiasaina amin'ny fikirakirana tranonkala.
Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'i Google mandray ny backlinks?
Google dia miezaka mafy miady amin'ny mpitsoa-ponenana. Miezaka ny mamantatra ireo hetsika rehetra mampidi-doza ary mankahala rohy voavidim-bola. Google dia miahy ny traikefan'ny mpampiasa ary maniry hanome azy ireo ny valin'ny fikarohana tsara indrindra. Izay no mahatonga ireo webmasters izay mitondra sonia hafanana ary mahazo ny fahaiza-manaon'ireo loharanom-baovaon'ity tranonkala ity dia mety tsy mendrika, sazy sazy mavesatra avy amin'i Google amin'ny endriky ny endriky sy ny fialan-tsasatra. Raha natoky tena i Google, dia afaka namantatra ny rohy spammy tamin'ny algorithmika izy ireo, ny indostrian'ny varotra Internet rehetra dia tsy niresaka momba ny ady amin'ny rohy karama.
Ho solon'izany, Google dia mankasitraka teknolojia fananganana rohy raha ny tanjona voalohany amin'ny webmasters dia tsy mahazo rohy ankapobeny, fa manome ny mpampiasa manana votoaty tsara sy ilaina. Raha mijery ny mason'ny mpampiasa ny votoatinao, dia hampifandray azy ireo amin'ny sitrapony. Amin'ity tranga ity, tsy mila mandany vola amin'ny fananganana rohy ianao. Hahazo loka fotsiny amin'ny olona ianao noho ny asa mafy ataonao.
Nahoana ianao no mila manangana rindran-tserasera amin'ny tranokalan'ny PR?
Misy rindran-tsakafo maro mihoatra noho ny vokatry ny fikarohana. Noho ny fanampian'ny high backlinks PR, ny tranonkalanao dia afaka mahazo marika bebe kokoa momba ny marika sy kalitao mifandraika amin'ny kalitao izay mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toerana misy anao. Tao anatin'ity lahatsoratra ity, nanapa-kevitra izahay fa hanome lisitry ny loharanom-baovao avo lenta avo lenta avoakan'ny dofollow.
Ny tranokalan'ny PR ho an'ny backlinks online dofollow izay mamorona:
http: // www. lahatsoratra. Org /
http: // www. hanangona. com /
http: // www. Lahatsoratra-afa-po-mpanjaka. com /
http: // www. manontany-Back. com /